Zavatra 7 Tamin’ny Fifaninanana Grand Prix Formula One Tao Bahrain Tokony Ho Fantatrao · Global Voices teny Malagasy
Zavatra 7 Tamin'ny Fifaninanana Grand Prix Formula One Tao Bahrain Tokony Ho Fantatrao
Voadika ny 06 Avrily 2016 6:32 GMT
Nampiantrano ny F1 Grand Prix ny Zotra Iraisam-pirenena ao Bahrain androany. Sary: @BAH_Int_Circuit
Nampiantrano ny fifaninana Grand Prix Formula androany i Bahrain. Nandresy tamin'ny fifaninanana familiana fiarakodia ny Mercedes nentin'i Nico Rsrcedes, narahin'ny Ferrari nentin'i Kimi Raikkonen teo amin'ny laharana faharoa sy Lewis Hamilton, tamin'ny Mercedes, teo amin'ny laharana fahatelo.
Ireto misy vaovao fito nozarain'ireo tompon-dakan'ny F1 tamin'ny fifaninanana fanamoriana fiarakodia tao Bahrain.
Fitaovam-pihinanana Volamena ho an'ny Mpanamory F1:
Araka ny filazan'ilay tompon-dakan'ny fifaninanana, Nico Rosberg, tsy maintsy mihanoka ny sakafo marainany amin'ny fitaovam-pihinanana volamena izy. Nizara ny sary tamin'ireo mpanjohy azy 1,2 tapitrisa tao amin'ny Twitter mihitsy aza izy. Noho ny fankasitrahany, nahatsiaro ireo sahirana izy.
Fitaovam-pihinanana Volamena ho an'ny mpamily F1 tao Bahrain. Sary: @nico_rosberg
ADALA!!! Sakafo maraina VOLAMENA ao Bahrain!
Mahatonga ahy te-hanao ny tsara. Hamarino ny fampiharana @ShareTheMealorg!
Lewis Hamilton, Sheikh Arabo:
Nitafy fitafiana ambony ambany Arabo i Lewis Hamilton raha niditra tao amin'ny lalana hifaninanana ary nitia izany. Nandoka tena tamin'ireo mpanjohiny 3,6 tapitrisa tao amin'ny Twitter izy fa nahatonga azy hahatsapa fa “mpanjaka” ny fitafiana akanjo fotsy lava miborera sy ny fehin-doha Arabo:
Tsy inona akory fa fitiavana sy fanajana ity kolontsaina ity, sy Bahrain !! Mahatsiaro ho toy ny mpanjaka!
Mahafinaritra ny filatsahana an'elonaina ao Bahrain:
Miaraka amin'i Hamilton hatrany, niditra tao anatiny tamin'ny alalan'ny filatsahana amin'ny elonaina tao Bahrain izy, ary nisioka ny zavatra niainany, izay nolazainy fa “mahafinaritra be”:
Niditra tao anatiny tamin'ny alalan'ny filatsahana an'elon'aina androany tao Bahrain!!! Tena mahafinaritra!
Nahazo Fiara Mofomamy i Alonso:
Tsy afaka nandray anjara tamin'ny fifaninanana ilay Espaniola Fernando Alonso satria tsy nandalo fitsaboana. Saingy nahazo fiara mofomamy izy, izay nozarainy tamin'ireo mpanjohy azy 2,4m tao amin'ny Twitter:
Toerana mahafinaritra eny amin'ny Tanihay:
Mpamily Frantsay Romain Grosjean kosa nizara sary nolazainy fa avy eny amin'ny lanitra ao Bahrain ary namaritra ilay vongana feno vovoka ao amin'ny tany efitra ho “tazana mahafinaritra”:
Arrived in Bahrain. Wonderful views from the sky today 😉 #r8g #f1 #BahrainGP #views pic.twitter.com/X2oJpuo8Gp
Tonga tao Bahrain. Tazana mahafinaritra avy eny amin'ny lanitra androany 😉
Orana sa Tafiotram-pasika:
Ary inona ny tany hay tsy misy tafiotram-pasika? Soa ihany, nisy orana kely tamin'ny andro voalohan'ny fifanintsanana, ary tsy nisy tafio-drivotry ny vovo-pasika. Tsy nitombina ny vaovao hitan'i Max Verstappen ary tsy tanteraka ny nofy ratsiny indrindra – saingy teo amin'ny toerana faha-enina no nisy azy tamin'ny fifaninanana.
Nantenaina tsy hisy orana amin'ity faran'ny herinandro ity. Ny tafiotram-pasika no mety ho tranga ratsy indrindra
Mihataka amin'ny zavatra nitranga tao amin'ny toeram-pifaninanana, nitohy tao amin'ny firenena mitokona ny hetsi-panoherana notapenam-bava, izay niharan'ny famoretana mahery maika avy amin'ny fitondram-panjakana ny fitroarana mitovy amin'ny Lohataona Arabo malaza tamin'ny Febroary 2011.
Mahatsiaro ny maro, anisan'izany ny Amnesty International fa anakonana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona izay mbola mitohy mandraka androany ilay fifaninanana familiana fiara. Hoy izy tamin'ny fanambarana:
“Behind the fast cars and the victory laps lies a government that is tightening its chokehold on any remnant of dissent in the country by stepping up arrests, intimidation and harassment of political opposition, critics and activists. The alarming erosion of human rights in Bahrain in recent years means that anyone who dares to criticize the authorities or call for reform risks severe punishment,” said James Lynch, Amnesty International’s Deputy Director for the Middle East and North Africa.
Hampiantrano ny Grand Prix Formula One i Bahrain amin'ity faran'ny herinandro ity, hetsika manintona ny maro izay mametraka ny firenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Lavitry ny toeram-pifaninanana, nanohy nandrakitra karazana fanitsakitsahana ny zon'olombelona mampatahotra ny Amnesty International .
“Ao ambadiky ny fiara miriotra mafy sy ny fankalazana fandresena dia misy fitondram-panjakana manamafy ny fifehezany ny mpanohitra sisa tavela ao amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fisamborana, fandrahonana sy fanaovana herisetra amin'ireo mpanohitra ara-politika, mpitsikera sy mpikatroka. Midika ny fahasimbana mampatahotra amin'ny fanajana ny zon'olombelona ao Bahrain tao anatin'ny taona vitsivitsy fa izay olona sahy mitsikera ny manampahefana na mitaky fanavaozana dia mety hiharan'ny sazy mahery vaika”, hoy i James Lynch, Tale lefitry ny Amnesty International ao Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra.